Imibuso engu-6 yokuPhila
Izinhlaka zihlukaniswa zibe yizizinda ezintathu futhi zibe yizimbuso eziyisithupha zokuphila. Lezi Zombuso ziyi- Archaebacteria, i-Eubacteria, i-Protista, i-Fungi, i-Plantae, ne- Animalia .
Izinhlaka zifakwe kulezi zigaba ngokusekelwe ekufananeni noma izici ezivamile. Ezinye zezici ezisetshenziselwa ukunquma ukubekwa kukhona uhlobo lweseli , ukuthenga izakhi, nokukhiqiza. Izinhlobo ezimbili eziyinhloko zamaseli angama- prokaryotic namaseli e-eukaryotic .
Izinhlobo ezivamile zokuthenga izakhi zihlanganisa izithombeynthesis , ukumunca, nokufaka. Izinhlobo zokukhiqiza zihlanganisa ukukhiqizwa kwe-asexual nokukhiqizwa ngokocansi .
Ngezansi uhlu lweMibuso eyisithupha yokuphila kanye nokwaziswa ngezici ezimbalwa kwisigaba ngasinye.
I-archaebacteria yi- prokaryotes ene-single eqale ukucatshangwa ukuthi yi-bacteria. Basendaweni ye - Archaea futhi banalo uhlobo oluhlukile oluhlukile lwe- RNA . Ukwakhiwa kwodonga lwamangqamuzana kulezi zilwane ezidluleleko kuvumela ukuba baphile kwezinye izindawo ezingenasiphephelo, njengemithombo yamanzi ashisayo nama-hydrothermal vents. I-Archaea yezinhlobo ze-methanogen ingatholakala nakwezinye izilwane nabantu.
Amandla: Ama-methanogen, ama-Halophiles, ama-Thermophiles, ama-Psychrophiles
Uhlobo lweselula : i- Prokaryotic
I-Metabolism: Kuye ngezinhlobo - oksijini, i-hydrogen, i-carbon dioxide, isibabule, isulfure kungadingeka ukuze kusetshenziswe imetabolism.
Ukutholakala kokudla okunomsoco: Ngokuya kwezinhlobo zezinto eziphilayo - ukudla okunomsoco kungase kube ngokumunca, okungewona izithombeynthetic photophosphorylation, noma i-chemosynthesis.
Ukukhiqizwa: Ukukhiqizwa kwe-Asexual nge fission kanambambili , ukuhluma, noma ukuhlukaniswa.
Lezi zinto eziphilayo zibhekwa njengabaktheriya beqiniso futhi zihlukaniswa ngaphansi kwe- Domain Bacteria . Ama-bacteria ahlala cishe kuzo zonke izinhlobo zemvelo futhi ngokuvamile ahlotshaniswa nezifo. Nokho, amaningi amabhaktheriya awabangeli izifo.
Ama-bacterium yizinto eziphilayo ezincane kakhulu ezibhala i- microbiota yomuntu. Kukhona amabhaktheriya amaningi emathunjini omuntu, isibonelo, kunama cell body. Amabhaktheriya aqinisekise ukuthi imizimba yethu isebenza ngokujwayelekile. Lezi zinambuzane zizalana ngesilinganiso esesabekayo ngaphansi kwezimo ezifanele. Iningi lokukhiqiza i-asexually nge- fission kanambambili . Ama-bacterium anezinhlobonhlobo zamangqamuzana e-bacterium ahlukahlukene ahlanganisa nxazonke, ama-spiral, nama-shapes.
Amagciwane: Amabhaktheriya , i- Cyanobacteria (i-blue-green algae), i-Actinobacteria.
I-Metabolism: Kuye ngezinhlobo - i-oksijeni ingaba yingozi, ibekezeleleke, noma iyadingeka ukuze i-metabolism.
Ukutholakala kokudla okunomsoco: Ngokuya kwezinhlobo zezinto eziphilayo - ukudla okunomsoco kungase kube ngokumunca, i- photosynthesis , noma i-chemosynthesis.
Ukukhiqizwa: Ukukhiqizwa kwe-Asexual
Umbuso we- Protista uhlanganisa iqembu elihlukahlukene kakhulu lezinto eziphilayo. Ezinye zinezici zezilwane (i-protozoa), kuyilapho ezinye zifana nezitshalo (algae) noma isikhunta (isikhunta se-slime). Lezi zinhlobo ze- eukaryotic zine- nucleus ehlanganiswe ngaphakathi kwendwangu. Amanye ama-proteli anama-organelles atholakala ezilwaneni zezilwane ( mitochondria ), kanti ezinye zinama-organelles atholakala kumaseli esitshalo ( ama-chloroplasts ). Ama-protists afana nezitshalo afaneleka i-photosynthesis.
Ama-protein amaningi angama- pathogens e- parasitic abangela izifo kubantu nasezilwaneni. Ezinye zikhona ebuhlotsheni bokuzibandakanya noma ukusebenzisana nomphathi wazo.
Izinhlangano: Amoebae , algae eluhlaza, ama-algae ama-brown, i-diatoms, i- euglena , isikhunta se-slime.
Uhlobo lweselula : I- Eukaryotic
I-metabolism: I- oksijeni iyadingeka ukuze kusetshenziswe umzimba.
Ukutholakala kokudla okunomsoco: Ngokuya kwezinhlobo zezinto eziphilayo - ukudla okunomsoco kungase kube ukumunca, i- photosynthesis , noma ukungenisa.
Ukukhiqizwa: Ngokuphindaphindiwe ukukhiqizwa kwe-asexual. I-Meiosis ivela kwezinye izinhlobo.
I-fungi ibandakanya kokubili ama-unicellular (imvubelo nezibunji) kanye nama-multicellular (amakhowe) eziphilayo. Ngokungafani nezitshalo, isikhunta asikwazi ukwenza i- photosynthesis . I-fungi ibalulekile ekubuyiseleni kabusha izakhi ezinemvelo. Zilalisa indaba ephilayo futhi zithole izakhi ngokusebenzisa ukungena.
Nakuba ezinye izinhlobo ze-fungal ziqukethe ubuthi obubulalayo ezilwaneni nasebantwini, ezinye zisebenzisekayo, njengokukhiqizwa kwe-penicillin kanye nemithi elwa namagciwane .
Ama-Organisms: Amakhowe, imvubelo, isikhunta.
Ukuthola ukudla okunomsoco: Ukuzikhethela
Ukukhiqizwa: Ukukhiqiza ngokocansi noma ukukhiqizwa kwe- asexual ngokusebenzisa ukwakheka kwe-spore .
Izitshalo zibaluleke kakhulu kuwo wonke umhlaba emhlabeni njengoba zihlinzeka nge-oxygen, indawo yokuhlala, izingubo, ukudla, kanye nemithi yezinye izinto eziphilayo. Leli qembu elihlukene liqukethe izitshalo ezinamanzi ezincane nezingahlanzekile , izitshalo nezimbali zokungahlolisisi, kanye nezitshalo ezithwala imbewu nezitshalo ezingezona imbewu. Njengempilo ye- photosynthetic , izitshalo yibo abakhiqizi abayinhloko kanye nokuphila okusekelwa yiziningi zamaketanga okudla ezinhlobonhlobo ezinkulu zeplanethi.
Lo Mbuso uhlanganisa izilwane eziphilayo. Lezi zi-eukaryotes ezinama-multicellular zincike ezitshalweni nakwezinye izilwane zokudla. Izilwane eziningi zihlala ezindaweni zasemanzini futhi zilingana ngobukhulu kusukela kuma- tardigrades amancane kuya ku-whale enkulu kakhulu. Izilwane eziningi zikhiqiza ngokukhiqizwa ngokocansi , okubandakanya ukukhulelwa (ukubumbana kwamagetti wesilisa nabesifazane).
Amagciwane: Izidumbu , ama-amphibians, izipanji, izinambuzane , izibungu.
Ukuthola ukudla okunomsoco: Ukungenisa
Ukukhiqizwa: Ukukhiqiza ngokocansi kubonakala ngokuphindaphindiwe okuningi nokusekelwe kwesinye isikhathi kwabanye.
Izingxenye zesitshalo sezimbali
I-System Domain Three
Izilwane Ezisheshayo Kulo Planethi Kwembulwa
Ukukhiqizwa kwamaBhaktheriya kanye neFission Binary
Izifo Eziyingozi Ezibangelwa Amagciwane
Izifundo zezilwane kanye nemibono yeProjekthi yesikole
Indlela Ama-antibiotics angenza ngayo amabhaktheriya angaphezu Kungozi
Umbuso we-Protista wokuPhila
I-Etymology Encane: IziGreki NeziLatin -
Ubuhlobo baseTurkey-Syria: Ukubuka konke
I-French Subjunctive - Le subjonctif
Yeka indlela ukuphakama kwe-Bebop kushintshile ngayo i-Jazz
I-American Bisque Pottery
I-SAT Izikole zokungeniswa kumaKholeji aPhakeme wezoBubulo beLiberal
Indlela Yokugwema Ukugula KwamaCigar
Igatsha Eliphezulu le-US Goverment
Ukubonakala Kuzinkanyezi: UJennifer Levinson noSteven Kanter
Indlela eya ku-Revolution yaseMelika
Ingabe amaphekula kufanele afunge eBhayibhelini enkantolo?
I-Beelzebufo (i-Devil Frog)
Indlela Yokwenza I-Bike Ifomu Yakho Yezokuthutha kuphela
I-Witch Cake noma i-Witch's Cake
Jordan | Amaqiniso nomlando
Umhlahlandlela Wokunikezela Ngesipho Wabafundi beKholeji
AmaFashions Amakhosi Ekhulwini Lama-17
Incazelo yesayensi yesayensi
I-Visa K-3-K-4 ayiyona into ejwayelekile yokuboniswa kwe-ejenti ye-ciudadano
Izinzuzo Zokudansa I-Tap
Incazelo kanye nezibonelo ze-irony (umdwebo wenkulumo)
Abantu Bomhlaba Wonke Nendawo
Yini Okushiwo Innuendo?
Inyanga Yomlando Omnyama Okuprinta